Shiinaha fool ka fool, Heart in Heart-ka dood cilmiyeed 7aad on shaqaalaha dhamaadka si guul-saaraha iyo qeybiye | Han ee Yueming
Fool ka fool, Heart in Heart-ka dood cilmiyeed 7aad on shaqaalaha dhamaadka guul leh
FG EE YUEMING laser GROUP IFC CO., LTD.
BY YUEMING laser GROUP IFC EE
VIEWS 1,305 Times
Si aad si fiican u fahamto shaqada iyo xaaladda live ah shaqaalahayaga, iyo in ay hagaajiso waxqabadka maamulka shirkadda iyo in la xoojiyo xidhiidhka u wax ku ool ah oo u dhexeeya shaqaalaha iyo maamulayaasha, Nadwada 7th of Han ee YueMing Laser Group ayaa lagu qabtay on 21aad Oct, 2017 ee Group ee xarunta.
Maamulaha guud ee kooxda JingSong Zhuo iyo maamulka sare oo ka socda waaxda kala duwan ka qeyb galay kulanka. Iyo wakiilka shaqaalaha la marti qaaday inay isgaadhsiin la yeeshaan iyaga ka fool ka fool si daacad ah.
Kulanka, wakiilka shaqaalaha kasta oo ka soo waaxda kala duwan si xor hadlay oo ku saabsan maamulka, duruufta shaqo, tababar shirkadda, nolosha madadaalada iyo daryeelka shaqaalaha iyo sameeyey talo it for.
Agaasimaha guud ee Our qaateen talo wadnaha oo markiiba la Yimaadeen xalka ugu wanaagsan. oo ballan qaaday in ay bixiyaan xal munaasib ah ugu dhakhsaha badan in ay dhibaato ah in aan lagu xallin karin .Oo jawiga shirka uu yahay mid aad u wanaagsan isla markiiba.
Kulanka ka dib, waxaan wada lahaa casho iyo wada arkay movie majaajilada ah. Waxaan waqti aad u fiican maalintaas.
Previous: Sports ayaa iga farxiya shirka -Madaxweynaha 13 Shaqaalaha Sports qabtay by Han ee YueMing Laser Group si guul ah ku dhamaaday
Next: YueMing Laser Group Holiday Notice Han ee
Laser CO2 Machine Calaamadaynta , Laser Cutting Machine ., 100w CO2 Laser xardho Jarida Machine , Best Laser Machine Calaamadaynta , 50w Laser Calaamadaynta Machine , 20w Fiber Laser Calaamadaynta Machine ,